Ihe omuma a na-ekpughe 8 Mobile SEO Myths
SEO bụ akụkụ dị mkpa nke njikarịcha weebụsaịtị. Na ọtụtụ ndị mmadụ na-emena-enyocha ha smartphones, web mobile ka gbawara. SEO maka igwe igwe abughi isiokwu di oke egwu, ma ihe di mwute kariaozi ị nwere ike ịchọta banyere mobile SEO bụ ụgha.
Ross Barber, ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-ewepụ ihe omimi nke 8 SEO - building creator free.
Ụgha nke 1: Ihe ndị mmadụ na - achọ na PC na mobile bụ otu
Eziokwu: Ndị mmadụ na-aga, n'ihi ya, ha anaghị enwe ọganihu nke ịgụ akụkọ zuru oke,ogologo blog posts na nnyocha nyocha na ngwaọrụ mkpanaka ha. Ọtụtụ mgbe, ha na-achọ azịza ọsọ ọsọ. Nke a na-akpaghị akaihe ndị mmadụ na-achọ na ngwaọrụ ọ bụla. Ụzọ kachasị mma iji chọpụta ihe ndị mmadụ na-achọ na ngwaọrụ mkpanaka ha bụ iji GoogleAdWords. Ị ga-enwe ike inweta nlezianya anya n'ime mkpokọta mobile nke isiokwu nke ndị mmadụ mebiri.
Echiche Ụgha nke 2: Nnyocha ọchụchọ na nyocha PC na-egosi otu ihe ahụ
Eziokwu: Ụlọ ọrụ ọchụchọ na-arụsi ọrụ ike iji mee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịmata iheha chọrọ mgbe ha chọrọ ya. Nke a pụtara na ebe nrụọrụ weebụ ndị na-enweghị mkparịta ụka enyi anaghị ebuli elu. A ga-ahazi ebe nrụọrụ weebụ gịmaka PC, ma ọ nwere ike ịkwadoghị maka ịchọgharị ekwentị. Ya mere, nchọta nke ọchụchọ PC na ọchụchọ ọchụchọ na-adị nnọọ iche. Nnyocha Googlekwadoro isi okwu a. N'ime ọmụmụ ihe ahụ, nnukwu onye nyocha ahụ chọpụtara na e nwere pasent 86% n 'ụzọ e si pụta yadịka ọkwa dị iche.
Echiche Ụgha nke 3: Ndị mmadụ ga-akwụsị ịkwụsị ekwentị han'ihi na ha ga-amalite na-enyocha ngwaọrụ ha wearable
Eziokwu: Ọ bụ ezie na ngwaọrụ ndị nwere ike iweghasị ahịa site na oké ifufe, ha anaghị adị ka ọkaibena mgbalị ha na-eme iji chọpụta ezi uche. Oge maka nkà na ụzụ ịchọpụta ihe bụ nanị mmalite..Siri na Google Goggles nweregbalịrị ime mgbanwe ahụ, ma Siri na-enwe naanị 3% osisi na ahịa, na-egosi na ndị mmadụ anabataghị ya kpamkpamechiche nke ichighari ngwa oru mkpanaka ha na-achoputa ichota ihe ndi ozo.
Ụgha nke 4: Mobile SEO abụghị ihe ọ bụla!
Eziokwu: Ọtụtụ ndị ga-achọ iche na mobile SEO bụ otu okwu na-adịna-atụgharị uche na gburugburu. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị anaghị aghọta ya nke ọma, ọ dịkwa ndị ọkachamara ole na ole. E nwere ọtụtụ ndịeche echiche na-ezighi ezi banyere mobile SEO, ma nke ahụ apụtaghị na ọ bụ echiche na-adịghị adị adị mkpa nke a ga-eleghara anya kpamkpam.
Ụgha nke 5: SEO bụ SEO, ọ bụ otu ihe ahụ
Eziokwu: Nope, nope, nope. SEO abụghị otu. SEO, SEO SEO, na SEO makaweebụsaịtị nke kachasị maka desktọọpụ na iji kọmputa rụọ ọrụ abụghị otu. Na mee elu mee ka ị ghọta nke a ma dezie ya maka saịtị gị, nkeị ga-enweta ọkwa na mgbanwe ndị ka mma.
Echiche Ụgha nke 6: Naanị hazie SEO na ekwentị mkpanaaka na voila - Mobile SEO!
Eziokwu: Anyị chọrọ ka ọ dị mfe ma ọ bụghị. I nweghị ike ịtọ SEO maka weebụsaịtị nagbanwee ya iji kwekọọ na ekwentị mkpanaaka. Ụzọ maka mobile SEO dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma. N'ihi na e nwere ndị ọzọmgbanwe dị iche iche nke ngwaọrụ mkpanaka n'ebe ahụ, mobile SEO ga-abụ nke a kapịrị ọnụ karịa kpọmkwem na ebe nrụọrụ weebụ SEO. Ịmụ banyere mobile SEO gachoro oge na ndidi, ma mgbe emere ya nke ọma, ọ ga-ewetara gị ezigbo nsonaazụ.
Echiche Ụgha nke 7: Wụpụta weebụsaịtị kachasị mma ma dezie ya maka ekwentị mkpanaaka
Eziokwu: Ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị iji mee ihe na mpaghara niile nwere ike iyi ihe dị egwuechiche. Otú ọ dị, ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee na ndị ahụ ka nwere ike ịchọta ihe ha chọrọ site na saịtị gị. N'ezie, ruo 60% nkendị mmadụ adịghị achọpụta ihe ọ bụla ha chọrọ na nyocha ọchụchọ. Nke a na-eme n'ihi na ọrụ mkpanaka na-edozi ma kwesiri ịbụmepụtara dịka ihe dị iche iche ma ghara ịbanye n'ime atụmatụ weebụ SEO. Dịka ọmụmaatụ, BMW na Amazon ejirila ọtụtụ puku dollarna-arụsi ọrụ ike iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ ha dị mkparịta ụka enyi na enyi nakwa na mobile SEO ejirila ya mee ihe.
Echiche Ụgha 8: Ọ na-esi ike inweta njikọ mgbe ị na-eji mobile SEO
Eziokwu: Ọ dịghị ihe ọ bụla ga - esi na eziokwu karịa nke ahụ! N'ezie, saịtị a ma amandị nwe ụlọ chọrọ inweta njikọ sitere na weebụsaịtị ndị nwere ezigbo SEO omume. Ya mere kwuo na ị ga-enweta njikọ site na Google, Mashable, na ndị ọzọsaịtị ikikere.
Anyị nwere olileanya na anyị enyerela gị aka igbochi ụfọdụ akụkọ ụgha SEO ma mee ka ìhè doobanyere ezi okwu.